Amacala aluhlaza okwesibhakabhaka. Okokuqala kwe-Ethan Bush saga | Izincwadi Zamanje
Amacala aluhlaza okwesibhakabhaka. Esokuqala se-Ethan Bush saga
I- "The Blue Crimes" ingeyokuqala esigabeni esimnandi esilingisa u-Ethan Bush. Kusukela ngo-2015, u-Enrique Laso ukwazile ukuheha umfundi kule nkakha yomlingisi we-saga u-Ethan Bush. Okwamanje lolu chungechunge lunezincwadi ezine, kepha okwesikhashana ... Ngesonto elizayo kuza isitolimende sesihlanu, esithi "Iphumulephi imiphefumulo?" Kepha sengathi lokho akwanele, okulandelayo kuhlelwe ukuthi kuphume cishe izinyanga eziyisithupha. Ngakho-ke ngeke sikuphuthelwe ukufunda.
U-Ethan Bush ungummeli ophikweni lwe-FBI's Behavior Analysis Unit, kepha hhayi noma ngubani nje, ungoyena mkhakha ongcono kunabo bonke. Kanye nethimba lakhe, ubhekene nezindaba ezimbi kakhulu nezesabekayo. Ngalesi saga, singacabanga ngokukhula komuntu uqobo kwe-protagonist futhi kancane kancane uqala ukubhekana nokwesaba kwakhe.
Izincwadi ezine zanamuhla "ubugebengu obuhlaza okwesibhakabhaka," "izidumbu aziphuphi," "ojekamanzi abaluhlaza okwesibhakabhaka," nethi "Izingane ezingenamehlo," kanye "namacala amabi." Yize kuliqiniso ukuthi ukuzifunda ngokulandelana kuhlala kungcono kakhulu, umbhali utshela izindaba ngendlela yokuthi zingafundwa ngokungahleliwe. Namuhla sethula owokuqala wabo.
1 Amacala Aluhlaza:
1.3 Ezinye izifiso
EJefferson County, abesifazane ababili abasebasha batholakala bebulewe ezinsukwini ezimbalwa bethandane. Zombili zitholakala ogwini lwechibi. Kepha into ethakazelisa kakhulu ukuthi ayikho, uma kungenjalo. Lokhu kubulawa kubukeka kuhlobene nelinye icala elenzeka eminyakeni engamashumi amabili edlule futhi lahlala lingaxazululiwe.
Edolobheni lapho wonke umuntu enokuthile akufihlayo, u-Ethan Bush nethimba lakhe elithile bazonikeza konke ukuthola umbulali ngalezi zenzo zobugebengu ezesabekayo.
I-protagonist ingabonakala ekuboneni kokuqala ukuba ngumlingiswa oqinile, oziqhenyayo futhi kwesinye isikhathi ongahambisani nokuziphatha. U-Ethan Kodwa-ke umlandisi uqobo uxoxa le ndaba ngombono owedlule. Lokhu sekuvele kukhombisa ukuthi ngezincwadi ezahlukahlukene, le nsizwa izokhula.
Amalungu eqembu uLiz, uMark noTom nabo baphumelele kahle. Ngamunye onezimfanelo zawo ezihlukile nezinhlamvu ezihlukile futhi ophambene ngokuphelele nalokho kwe-protagonist. Basenza iqembu elihle, bagcwalisane.
Kungabonakala kungafaneleki kubantu abaningi, kepha elinye lamaqiniso anelukuluku kunoveli indawo yemicimbi. Ngokushesha nje lapho ufunda incwadi ungaqinisekisa ukuthi zonke izindawo zingokoqobo. Uma usesha kuGoogle Maps futhi umbheka ku-Street View, uzozithola usuphakathi kwesayithi lala macala.
I- "Blue Crimes" ibe ngenye yezincwadi ezithengwa kakhulu e-Amazon kulo nyaka ka-2016. Kepha lokhu akuyona izindaba emnandi kunazo zonke, ilungelo lobunikazi selithengisiwe ngenxa yokujwayela ifilimu.
Maduze nje sizokhuluma kabanzi ngalo mbhali wokuqhuma kanye nalesi saga esimnandi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » Inoveli emnyama » Amacala aluhlaza okwesibhakabhaka. Esokuqala se-Ethan Bush saga
Inkondlo ka-Anne Frank isendalini yama-euro ayi-140.000
Amanoveli angu-6 amakhulu abhalwa ngesikhathi sokurekhoda